Intokazi yaseMgungundlovu idlulele esigabeni esilandelayo kuMiss South Africa
UMATSEPO Sithole waseMgungundlovu ungomunye wabamele iKwaZulu-Natal kwiTop 15 kaMiss South Africa Isithombe:ESIGCINIWE
CHARLES KHUZWAYO | June 25, 2020
ISIMOMONDIYA saseMgungundlovu, uMatsepo Sithole, ngomunye wezintokazi ezingu-15 ezisele ohlwini okuzohlungwa kuzo ezizodlulela emzuliswaneni wamanqamu kaMiss South Africa 2020.
Amagama ezingqazu esezizovotelwa ngumphakathi amenyezelwe yintokazi ephethe isicoco sikaMiss South Africa 2019, uSasha Lee-Olivier, izolo ebusuku.
Lezi zipawupete zimele izifundazwe eziyisikhombisa. IGauteng izihola phambili ngezintokazi eziyisithupha (ezintathu okungezaseTshwane noyedwa yaseSoweto), kulandele i- Eastern Cape, Kwa-Zulu Natal neWestern Cape abamelwe ngezimbili neFree State, Limpopo neNorth West emele yintokazi isifundazwe ngasinye.
Ngokwesitatimende esithunyelelwe imithombo yezindaba, ingcabha seyisemalungeni omphakathi ukuqinisekisa ukuthi izintandokazi zawo zidlulela esigabeni samanqamu ngokuthi avote ngobuningi bawo.
"Emzuliswaneni owandulela owamanqamu kuboshelwe iqembu labesifazane elisezingeni eliphezulu ngokwezemfundo okubalwa kulo odokotela ababili, abasemkhakheni wezokhangisa, abakhangisi bengqephu abasezingeni lomhlaba, ungoti wezokudla, umlingisi nabafundi abenza izifundo zamabhizinisi, ezomnotho nezomnotho," kusho isitatimende.
Sezikhishiwe nezinamba abazovotelwa ngazo futhi bakleliswe ngazo ngenxa yamagama abo.
1.Ezimomondiyeni ezidlana imilala kubalwa u-Anazarde Omar (21) waseCrown Gardens eGoli futhi owenza izifundo zeBA Strategic Communication in Marketing e-University of Johannesburg;
2. Aphelele Mbiyo (24) waseMthata kodwa okhulele ePort Elizabeth. Wenza izifundo zeBA in Integrated Marketing Communications.
3. UBusisiwe Mmotla (27) waseSoweto futhi onguthisha weSenior & FET Phase okuyiziqu azenza e-University of Johannesburg ngo2017 lapho enza khona iziqu zeBachelor of Education. Njengamanje wenza iDiploma in Personal Training eTrifocus Fitness Academy. Wake waba nguMiss Soweto ngo2017 futhi wahlabana nge-USN Face of Fitness 2019.
4. UChantelle Pretorius (24) waseTshwane, ochithe izinyanga eziyisithupha esebenza e-Europe. Uqedela iziqu zeB.Com Business Management degree e-Unisa futhi waphothula iDiploma in Nutrition eThe Blackford Centre e-UK;
5. UJordan van der Vyver (24) waseGreenpoint eCape Town futhi ungumkhangisi wengqephu obezinze e-US; 6. UKarishma Ramdev (25) waseChatsworth, KwaZulu Natal kodwa osebenzs njengodokotela oqeqeshiwe eCharlotte Maxeke Academic Hospital;
7. ULebogang Mahlangu (24) waseSoshanguve, eGauteng. Ungingoti wokudla futhi onebhizinisi lokubhaka izinkwa;
8. UMatsepo Sithole (21) waseMgungundlovu futhi owenza unyaka wesinr ezifundweni zomthetjo e-University of Pretoria;
9. UMelissa Nayimuli (24), waseButterworth e-Eastern Cape kodwa usebenza eGoli lapho esebenza khona njenge- account manager ye-marketing agency. Uneziqu zeBA in Motion Picture Medium e-AFDA;
10. UNatasha Joubert (22), waseCenturion, Tshwane futhi lapho esebenza khona njengePublic Relations Officer eRFJ Inc. Ungummeli nomsunguli wenkampani iNatalia Jefferys (Pty) Ltd. Uneziqu zeB.Com Marketing Management azenza eBoston City Campus; 11. U-Olin-Shae De La Cruz (26) waseBryanston, Gauteng futhi unyaka wokugcina ezifundweni zeBusiness Administration in Media Operations Management eBoston Media House. Ungomunye wabasunguli wenkampani iSwish EP;
12. Palesa Keswa (23) waseSasolburg eFree State wenze iziqu ze- economics and risk management futhi wenza ezeHonours in Economics eNorth West University.
13. USavannah Schutzler (24), waseRondebosch eWestern Cape,ungumlingisi oneziqu zeBA Degree in Drama and Theatre Studies azenza eStellenbosch University. Wadlulela eAFDA lapho aphothule ezeHonours kwi-live performance futhi uphothule iDiploma in Media Makeup and Styling.
14. UShudufhadzo Musida (23) waseHa-Masia eLimpopo futhi uneziqu zeBachelor of Social Sciences in Philosophy, Politics and Economics e-University of Pretoria. Njengamanje wenza ezeBA Honours in International Relations e-University of Witwatersrand.
15. UThato Mosehle (25) waseKlerksdorp eNorth West uwudokotela futhi ozimisele ngokuba i- anaesthesiologist.
Inhloko kaMiss South Africa Organisation, uStephanie Weil, ujabule kakhulu ngomsebenzi wamajaji alo mqhudelwano okungu-Anele Mdoda, Bokang Montjane-Tshabalala, Liesl Laurie noAdè van Heerden ngomsebenzi onzima abawenzile ukukhetha lezi zingqazu. Umphakathi uzovotela lezi zintokazi ukuze zidlulele emzuliswaneni wamanqamu. Ukuvota kuqale namhlanje ngo9 ekuseni futhi kuzovalwa ngoJulayi 16 ngo11 ebusuku. Abafuna ukuvota bengangena kule-website: misssa.co.za. Umcimbi wokumenyezelwa kwabahlabane uzosakazwa bukhoma kuM-Net nakuMzansi Magic.